Ama-movie amahle kakhulu we-mafia: ayini? Kubuyekeziwe 2018 | Nginike isikhathi sokuphumula
UGabriela moran | | Cine, I-Action Cinema, Cinema by izinhlobo, General
I-Las Amabhayisikobho e-Mafia avuse intshisekelo ephezulu kuzithameli zomhlaba wonke. Kuziza sithola inhlanganisela ekhangayo igcwele amahlazo nezenzo. Ngalokho kukhulunywa ngezinkinga ezifana nokushushumbiswa kwempahla, izingxabano phakathi kwezinhlangothi ezahlukahlukene nobuciko obukhulu bokwenza izinhlelo ezingaphandle komthetho osunguliwe. Izihloko ezinhle zokuqhuma esikrinini esikhulu! Kungakho kulo lonke lolu daba siveza ukukhethwa kwethu ngama-movie we-mafia amahle kunayo yonke.
Iziza azimeleli noma iyiphi inganekwane: kukhombisa iqiniso elibuhlungu elikhona ezinhlanganweni mafia nabazungezile. Kodwa-ke, izindaba zisigcwalisa nge-adrenaline nozungu ngokusebenzisa abalingiswa abasebenza ngokuthanda, amandla nokuhaha. Qhubeka ufunde ukuze ufunde ngezindaba ezibaluleke kakhulu uhlobo lwamafilimu olwenzile!
Ukushushumbisa kuyicala: izimpahla ezingekho emthethweni ziye zahluka ngokuhamba kwesikhathi nakuzo zonke izindawo. Ugwayi, utshwala nezidakamizwa zokwenziwa zifakiwe kuhlu lwezinto ezithengiswayo ezijeziswe ngezikhathi ezahlukahlukene. Kunezinhlangano ezinikele ekushushumbiseni ngisho nabantu!
Ngenxa yobunzima bokusebenza, izigebengu zihlela ngaphakathi kwamaqembu alawulwa imihlahlandlela engenakunyakaziswa. Yingakho ama-mafia adume ngokwakhiwa ngokuhamba kwesikhathi. Njengesibonelo sithola ifayela le- Ama-mafia ase-Italiya, amaRashiya namaJapane aphakathi kwamazwe aziwa kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, i- Izwekazi laseMelika nalo linamanethiwekhi abanzi ubugebengu obuhleliwe, obukhuthaze ama-movie amaningi we-mafia.
Phakathi kwezihloko ezikhiqize ababukeli abaningi kunawo wonke kumidlalo yaseshashalazini, sithola okulandelayo:
1 IGodfather (Ingxenye I, II, III)
4 Kufakwe ngaphakathi
5 Okungathintwa kuka-Eliot Ness
7 Amanye ama-Mafia Movie anconyiwe
IGodfather (Ingxenye I, II, III)
I-classic ye-cinematic enezigcawu ezimbili. Kuwukuguqulelwa kwenoveli kaMario Puzo futhi yayiqondiswe nguFrancis Ford Coppola owaziwayo. Ifilimu yokuqala ye-trilogy iwine i-Oscar yefilimu ehamba phambili yonyaka. Yakhishwa ngo-1972 futhi yafakwa izinkanyezi uMarlon Brando, u-Al Paccino, uRobert Duvall, uRichard Castellano noDiane Keaton.
"U-Godfather" utshela indaba yomndeni wakwaCorleone: yakhiwa ngumndeni wase-Italiya-waseMelika ophakathi kwemindeni emihlanu ebaluleke kakhulu yeCosa Nostra yaseNew York. Lo mndeni uphethwe nguDon Vito Corleone, ohlobene nezindaba ze-mafia.
Umlando ilandiswe emuva engxenyeni yesibili neyesithathu eyakhishwa ngo-1974 nango-1990 ngokulandelana. Umndeni unamadodana ama-3 nowesifazane. Kwabanye babo kubalulekile ukuqhubeka nebhizinisi lomndeni, kepha abanye abanandaba. Imvamisa sithola uDon Vito esebenza nomndeni ukugcina umbuso wakhe.
Kuwo wonke amafilimu amathathu sithola imifelandawonye futhi ukungqubuzana phakathi kwemindeni emihlanu eyinhloko eyingxenye yamafiya ase-Italiya-aseMelika futhi alawula isifunda. Ngaphezu kwamaCorleones, sithola umndeni ITattaglia, iBarzini, iCuneo neStracci.
Ngaphandle kokungabaza, kuyinto trilogy ongeke uphuthelwe! Amafilimu akhe amathathu aphakathi kwemidlalo ehlonishwa kakhulu neyaziswa umhlaba wonke. Ngo-2008, ikleliswe kuqala ohlwini lwama-Movie Ahamba Phambili Angu-500 Esikhathi Sonke., eyenziwe umagazini i-Empire.
Ungomunye wemikhiqizo emele kakhulu iQuentin Tarantino, ikhishwe ngo-1994 futhi ithathwa njengenye yamafilimu amahle kakhulu kule minyaka eyishumi. I-movie ihlukaniswe yaba izahluko eziningana ezixhumene. Ilingisa abalingisi abaziwayo abanjengo: Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson noBruce Willis.
Isakhiwo utshela indaba kaVincent noJules: amadoda amabili ahlabayo. Basebenzela isigelekeqe esiyingozi okuthiwa UMarsellus Wallace, ononkosikazi omuhle ogama lakhe linguMia. UMarsellus uxwayisa abashayi bakhe ngomsebenzi wokuthola isikhwama esimangazayo esantshontshwa kuye, kanye nokunakekela umkakhe lapho engekho edolobheni.
UMia yintokazi enhle enesithukuthezi ngempilo yakhe yansuku zonke, ukuze uthandana noVincent: Omunye wabasebenzi bomyeni wakhe! Ubudlelwano phakathi kwalaba bobabili bumele ingozi enkulu uma umyeni ethola ngesimo. Yize izixwayiso zikaJules, uVincent avumela imizwa yakhe ngoMia ikhule futhi azenzele zonke izifiso zakhe, enye yazo ebeka impilo yakhe engcupheni!
Kokunye ukuzulazula kwabo edolobheni, bahambela iklabhu lapho esinye sezigcawu eziyizifanekiselo zefilimu senzeka ngomdanso ongaziwa phansi.
Ngesitayela se-quaranty sikaTarantino, indaba iyaqhubeka kugcwele udlame, ukubulala, izidakamizwa namahlaya amnyama. Uma ungakayiboni, ngeke uyiphuthe!
Lesi sihloko sihambisana nokubuyiswa kabusha kwefilimu eyakhishwa ngo-1932. Le nguqulo entsha yakhishwa ngo-1983 futhi yalingisa u-Al Paccino. "Scarface" cnoma ifana nefilimu eyodwa yama-mafia edale impikiswano enkulu: Kukalwe ngo- "X" e-United States ngokuqukethwe kwayo okuphezulu kodlame!
UTony Montana, i-protagonist, ungowokufika waseCuba onesikhathi esedlule esididayo esihlala e-United States. Ekhathele impilo egcwele ubumpofu nokulinganiselwa, uTony unquma ukuthuthukisa ikhwalithi yempilo yakhe ngazo zonke izindlela. Kungakho yena nomngani wakhe uManny beqala ukuthatha imisebenzi engekho emthethweni yabaphathi bezixuku zendawo. Ngokushesha isifiso sakhe sikhula futhi Uqala ibhizinisi lakhe lokuthengisa izidakamizwa futhi akhe inethiwekhi eqinile yokusabalalisa nenkohlakalo. Waba ngomunye wabashushumbisi bezidakamizwa ababaluleke kakhulu esifundeni!
Lapho ephumelela, unquma ukuzuza intombi yesinye sezitha zakhe. UGina, odlalwa nguMichelle Pfeiffer, ungowesifazane ohlonishwayo oshada noTony kungekudala.
UTony uba umlutha wecocaine futhi ukuthola kunzima ngokwengeziwe ukulawula intukuthelo yakhe. Uqala ukukhulisa uhlu lwakhe lwezitha futhi abe nezinkinga emshadweni. Ekuqhubekeni kwendaba, kwenzeka izigcawu eziningi zokungqubuzana nezitha zenhlangano.
Awukwazi ukuphuthelwa yile movie, ingaphakathi kwabangu-10 abaphezulu ekukhetheni i-American Film Institute!
Kwabadumile umqondisi uMartin Scorsese; sithola elinye lamafilimu ama-mafia asanda kukhishwa ngo-2006. Emdlalweni wamaphoyisa osolisa, sithola uLeonardo Di Caprio noMatt Damon njengabalingisi abaphambili. Abasukile bawina i-Oscar ngesithombe esihle salowo nyaka!
Isakhiwo sigxile empilweni ye- abantu ababili abangena ngesinyenyela ezinhlangothini eziphambene: iphoyisa lingene ngesinyenyela emafia kwathi isigelekeqe sangena emaphoyiseni. Inhlanganisela eqhumayo egcwele idrama, ukungabaza nozungu! Umlingisi we-eccentric uJack Nicholson unikeza inqwaba yezigcawu ezizoshukumisa imizwa yakho ngokudlala okwehlukile njengoba edlala uFrank Costello. Ungumgulukudu onegazi onezitha eziningi futhi onobudlelwano obusondelene kakhulu nomunye wabaphikisi ababili, omhlolela uMnyango Wamaphoyisa waseBoston.
Kukhona unxantathu wothando eholwa ngudokotela wezengqondo ovela emnyangweni wamaphoyisa.
Sithola izingqinamba ezingalindelekile endabeni kanye nezenzo eziningi, yingakho ithathwa njengelinye lamafilimu amahle kakhulu ohlobo. Ukungasho nokuthi i-Scorsese ihlala isiqinisekiso se-movie ngokubulawa okukodwa!
Okungathintwa kuka-Eliot Ness
Ikhishwe ngo-1987, le filimu exhunywe ne-mafia ixoxa indaba ehlukile: okungukuthi, inguqulo yamaphoyisa yalokho okwenzekayo ekulweni nobugebengu obuhleliwe. Kudlale uKevin Costner kanti umlingisi ophambili ubandakanya uRobert de Niro, kanye noSean Connery.
Isakhiwo sKwenzeka eChicago ngesikhathi sobusuku besixuku saseMelika. I-protagonist iyi- amaphoyisa anomsebenzi wawo ukuphoqelela i-Prohibition, ngakho uhlasela ibha e-Al Capone esabekayo. Kuleyo ndawo uthola okungajwayelekile okumenza acabange ukuthi amaphoyisa asedolobheni agwazelwa ngabashushumbisi; ukuze dNquma ukuhlanganisa ithimba elizokusiza udilize udonga lwenkohlakalo.
Ukweqiwa okukhulu kwe-cinema yama-XNUMXs yakudala enezenzo eziningi zikulindile!
Kudlala uDenzel Washington, le filimu yomlando isohlwini lwethu lwama-movie amahle kakhulu e-mafia ngoba isuselwa emicimbini yeqiniso futhi sibona izinhlangothi zombili zempumelelo ngokuhlala ngaphandle komthetho.
I- Indaba kaFrank Lucas, omunye wabazingeli bomthengisi wezidakamizwa owaziwayo ofa ngezimbangela zemvelo. ULucas wayenobuqili futhi ehlakaniphile, ngakho-ke wafunda ukuphatha ibhizinisi futhi Uqale ukusungula inkampani yakhe lapho afaka khona wonke umndeni wakhe ukuthi wayengowesizinda esithobekile. ULucas uhlangana no-Eva, owesifazane omuhle anquma ukushada naye futhi aqale umndeni.
Ngokushesha bona baqala ukuhlala ngendlela engaqondakali eheha umphenyi ongenakonakala uRichie Roberts, edlalwa nguRussel Crowe. Ngokushesha umphenyi uqala uphenyo oluphelele ngenhloso yokuveza umuntu omusha omusha we-mafia ukuze amyise ejele.
Ekuthuthukisweni kwefilimu singakuthola izigcawu zodlame nezenzo ezinkulu zenkohlakalo ezisetshenziswa ngamafia ukuqhubeka nokusebenza.
Siyalubona uhlangothi lomuntu lwezikhohlakali kule filimu, kepha izinkinga aziyeki ukubakhathaza. I-American Gangster isiphenduke okuyisisekelo kulabo abathanda ama-movie e-Holywood mob!
Amanye ama-Mafia Movie anconyiwe
Ngokungeziwe ezihlokweni ezibalulwe ngenhla, sithola ezinye ezihambisana kakhulu futhi ezishiwo ngezansi:
Amaqembu ezigelekeqe eNew York
Ukufa phakathi kwezimbali
Khomba uthando olungenalutho
Hlwitha: Izingulube Namadayimane
Uhlu alupheli! Kunezihloko ezingenakubalwa zalolu hlobo oluhlinzeka kakhulu ngezigcawu ezinhle zokusebenza, ukungabaza, ukunethezeka nobudlova. Umthetho oyinhloko ukubulala ukuze usinde!
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » General » Amabhayisikobho amahle kakhulu we-mafia
Ama-movie ongawabuka ku-YouTube mahhala (futhi asemthethweni)